प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै घरमा प्रबेश निशेध, कारण थाहा पाएर सबै चकित — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै घरमा प्रबेश निशेध, कारण थाहा पाएर सबै चकित
काठमाडौ। अघिल्लो साता काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेको भन्दै सम्बन्धितलाई खबर पठाए भने मिडियालाई पनि सोही जानकारीसहित विज्ञप्ति जारी गरे।
तर आइतबार बैठक भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा राखियो। पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताको धर्नालगायतका कारणले गर्दा बैठक सानेपाबाट बूढानीलकण्ठमा सारिएको बताएका छन्।
आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवाले कार्यकर्तालाई छलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले बैठक सानेपामा बस्ने भनिएपनि रौतहटका कार्यकर्ताले जारी राखेको अनसन छल्न देउवा भागि हिँडेको आरोप लगाए।
रौतहटका कार्यकर्ताले क्रियाशिल सदस्यतामा असन्तुष्टि जनाउँदै १०० भन्दा बढी दिनदेखि अनसन गर्दै आएका छन् । पार्टी कार्यालयमा अनसन र असहज अवस्थाको सम्बोधन गर्नुको साटो देउवाले बैठक स्थल नै सारेको भन्दै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका पौडेलले यससँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नको वर्षा नै गरेका थिए।
पार्टी कार्यालयमा अनसन ११४ दिनदेखि जारी छ। कति दिन भाग्ने पार्टी कार्यालयबाट ? उनीहरुको माग सम्बोधन किन नगर्ने ? तपाईँकै जिल्ला डडेलधुरामा पनि साथीहरुले अन्याय भयो भनेर मंसिर १ देखि अनसन बस्ने भनिराख्नु भएको छ’, पौडेलको प्रश्न थियो।
यो अवस्थापछि तपाईँ किन गम्भीर हुनुहुन्न ? अन्य स्थानमा पनि कतिको नाम थपिएको छ, कतिको काटिएको छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछौँ ?
उनले अगाडि थपे, ‘साथीहरुको कुरा सुनिदिने र सुनुवाइ गरिदिने कसले ? कार्यालयका मुख्यसचिव आमा आईसीयूमा रहेको भन्दै अस्पतालतिर हुनुहुन्छ। क्रियाशिल छानबिन समितिका साथीहरु केन्द्रीय समितिलाई बुझाइसकेका छौँ भनेर पन्छिनुभएको छ।
गुनासो आइसकेपछि सम्बोधन गर्न नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ। उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सचेत गराउँछु। स्मरण रहोस्, देउवा प्रधानमन्त्री भएयता पार्टी कार्यालय गएका छैनन् भने पार्टीका बैठक निजी निवासमै गर्दै आएका छन्।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले नेतृत्व चयन मात्रै गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले अधिवेशन गरेर तय गर्ने निर्णय आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरेको छ।
महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ कार्यसमितिले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा अधिवेशन गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। कांग्रेसले महाधिवेशनमा नेताहरू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महाधिवेन मूल तयारी समिति गठन भएको छ। जसमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, संघीय संसद्का सदस्यहरू, सातवटै प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरू सदस्य रहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अर्थ संकलन समिति गठन भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
भोजन तथा आवासको सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, विदेशी पाहुना स्वागत तथा सत्कार समितिमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, प्रचारप्रसार समितिमा प्रवक्ता शर्माले जिम्मा पाएका छन्।
यस्तै, उद्घाटन समारोह एवं मञ्च व्यवस्थापन समितिमा काठमाडौं जिल्लाका सभापतिलाई जिम्मा दिएको छ। जसमा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सभापति सदस्य रहनेछन्।
स्वास्थ्य समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, सांस्कृतिक समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ र स्वयंसेवक मूल समितिको संयोजकमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक,
संघका अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर मास्के चयन भएका छन्। समितिका संयोजकले आवश्यकताअनुसार सदस्य चयन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको शर्माले जानकारी दिए।